DecideAlready: क्याप्चर र रैंक प्रतिक्रिया | Martech Zone
मंगलवार, फेब्रुअरी 11, 2014 Douglas Karr
हामी उपकरणहरू मन पराउछौं जसले ग्राहकहरूबाट जानकारी लिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ कुनै एक फिट-सबै समाधान छ। कहिलेकाँही तपाईलाई बिभिन्न प्रश्न विकल्पहरू चाहिन्छ, कहिलेकाँही गतिशील प्रश्न र उत्तर, अरू समयमा तपाईलाई निजीकरण चाहिन्छ। मलाई इन्डियानापोलिसमा न्यायाधीश हुन भनिएको छ ' TPointPoint मीरा पुरस्कार २०१ 2014 को लागि र जोशुआ हलले न्यायाधीशहरूको लागि जानकारी लिन र प्रत्येक उम्मेद्वारलाई भोट दिन उपकरणको उपयोग गर्दैछ। यो एक उत्तम उपकरण हो जुन नवीनको अर्को आउटपुट छ SproutBox मा इनक्यूबेटरहरू.
कसरी निर्णय लिन्छ
निर्णय गर्नुहोस् बाँकी भन्दा अलि फरक छ ... यो छिटो (र वर्तमानमा नि: शुल्क) उपकरण हो जसले तपाईंलाई भोट दिन वा र्याक गर्नको लागि प्रश्न वितरण गर्न अनुमति दिन्छ र छिटो र सहजै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्दछ।
यहाँ5कारणहरू छन् DecideAlready बाट साइन अप गर्न:
यो नि: शुल्क हो! निर्णय लिनको लागि DecideAlready प्रयोग नि: शुल्क हो। हाम्रो सरल र क्रमबद्ध निर्णय विधिहरू सधैं स्वतन्त्र हुन्छन्। हाम्रो उन्नत निर्णय विधि पनि, DecideAlready निर्णय मेसिन विशेष रूपमा सीमित समयको लागि नि: शुल्क हो।
कष्टकर ईमेल 'जवाफ-सबै' अन्त गर्नुहोस् - जब तपाईं ईमेल मार्फत व्यक्तिहरूको समूहलाई विचारहरूको लागि सोध्नुहुन्छ, तपाईं प्रायः जवाफको जस्तो लाग्ने अन्तहीन स्ट्रिंगलाई स्पार्क गर्नुहुन्छ। तपाईका धेरै जसो सहभागीहरु अरुको कुरा सुन्नु भन्दा उनीहरूको भनाइमा रुचि राख्छन्।
छिटो निर्णय लिनुहोस् - केहि निर्णयहरू द्रुत रूपमा लिनु आवश्यक छ। निर्णय डेडरेडियसले तुरून्त प्रतिक्रिया सुझाव दिन्छ र परिणाममा हिसाब गर्छ। तपाईंसँग प्रतिक्रियाको लागि समय सीमित गर्न विकल्प छ। डिसिडेअल्डरेड निर्णय मेसिनले पनि स्वचालित रूपमा तपाईंको परिणामहरू गणना गर्न सक्दछ र तपाईंको सहभागीहरूलाई अन्तिम निर्णय ईमेल गर्दछ।
आत्मविश्वास निर्माण गर्नुहोस्। सहमति निर्माण गर्नुहोस् - जब तपाइँ निर्णय लिनुहोस् प्रयोग गरेर एक निर्णय लिनुहुन्छ, तपाइँका सबै सहभागीले थाहा पाउनेछन् कि तिनीहरूको आवाज सुनेको थियो। उनीहरूलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि उनीहरूको इनपुट निष्पक्ष रूपमा विचार गरीएको थियो, र त्यो निर्णय पेशेवरिक रूपमा गरिएको थियो।
निर्णय मेसिन - यो शक्तिशाली छ र यो रमाईलो छ! डिसिडेअल्डरेड निर्णय मेसिनले तपाईंलाई सबैभन्दा जटिल निर्णयहरू सजीलै गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईका प्रतिभागीहरु तपाईको उत्तरहरुलाई धेरै मापदण्डमा आधारित दर दिन सक्छन्। जब मतदान बन्द हुन्छ, तपाईं प्रत्येक मापदण्डको महत्त्व समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। निर्णय मेसिनले अन्तिम निर्णयमा तुरुन्त तपाईंको कार्यको प्रभाव तुरून्त अनुमान गर्दछ!
टैग: निर्णय गर्नुहोस्निर्णयनिर्णयसर्वेक्षणस्प्राउटबक्ससर्वेक्षण
डिजिटल मार्केटिंग र भिडियोको प्रभाव